ESI NYEFEE FOTO SITE NA IPHONE RUO GAM AKPORO - A GAM AKPORO - 2019
Nyefee foto site na iPhone ruo gam akporo
Ekekọrịta Wi-Fi bụ atụmatụ bara uru nke eji laptọọpụ ọ bụla ma ọ bụ kọmputa nwere eriri Wi-Fi. N'ezie, enwere ike ịrụ ọrụ a n'enweghị ntinye mmemme pụrụ iche, Otú ọ dị, a ga-arụrịrịrịrịrịrị omume dị iche iche karịa iji ngwọta pụrụ iche. Magic WiFi bụ ngwa dị mfe na nke na-enye gị ohere ịmalite kesaa netwọk ikuku gị ozugbo.
Magic WiFi bụ Windows dị mfe nke na-enye gị ohere ịkekọrịta Ịntanetị dị na laptọọpụ na ngwaọrụ ndị ọzọ (smartphones, tablets, etc.). Usoro ihe omume ahụ ga-emepụta ebe ị ga-esi nweta ohere ọhụụ nke ngwaọrụ niile nwere nkwụnye Wi-Fi nwere ike ijikọ.
Jiri na-enweghị nrụnye
Mgbe nbudata Magic Wai Fay, ị ghaghị ịgba ọsọ EXE ka ị malite ozugbo iji ọrụ ahụ. Ihe omume ahụ anaghị achọ ka echichi, yabụ na ị ghaghị itinye faịlụ a na-arụ ọrụ na ebe ọbụla na kọmputa gị.
Dị ka ịmepụta netwọk ikuku ọ bụla, na Magic Wai Fay, ịkwesịrị ịtọbanye (SSID) ka aha a wee nwee ike jikọọ na netwọk na ngwaọrụ ndị ọzọ, yana nkwupụta siri ike nke ga-egbochi nnwere onwe nke netwọk site na ndị ọbịa a na-akpọghị.
Họrọ ụdị njikọ
Ọ bụrụ na kọmputa gị ejiri njikọ dịgasị iche iche, mgbe ahụ, a na-atụ aro ka ị pinye aka ozugbo nke Intaneti ga-ekesa. Site na ndabara, usoro ihe omume ahụ ga-ahọrọ ụdị nke a na-eji ugbu a na kọmpụta gị.
Ị ga-ama mgbe niile nke ngwaọrụ ndị ejikọrọ na netwọk gị. N'ime usoro ihe omume ahụ, ị ​​nwere ike ịhụ aha ha, yana iyi, IP na MAC adreesị. N'ụzọ dị mwute, n'adịghị ka ihe atụ, site na Connectify, ọ nweghị ụzọ isi gbochie ohere ịnweta netwọk ikuku maka ngwaọrụ ahọpụtara.
Ọ bụrụ na WiFi WiFi enweghị ike ịmepụta isi ma ọ bụ ngwaọrụ anaghị ejikọta na ya, usoro ihe omume ahụ na-enye ntụziaka dị mkpa iji kpochapụ nsogbu na ọrụ na njikọ.
Magic WiFi uru:
1. Nkwado dị mfe na nkwado maka asụsụ Russian;
2. Naghị achọ nhazi;
3. A na-ekesa oke ọrụ ahụ n'efu.
Ọghọm nke Ime Anwansi WiFi:
1. Mgbe ịmalite mkpa ọhụrụ ịbanye na ntọala niile.
WiFi Wiwa bu ikekwe ngwọta kachasị mma ma dị mfe maka ikesa Internet netwọk site na laptọọpụ. Otu interface dị mfe ma dị mma, nkwado maka asụsụ Russian na ọrụ siri ike na-arụ ọrụ ha, n'ihi ya, usoro ihe omume ahụ bụ nnukwu ihe ịga nke ọma.
Ihe nzuzo anwansi Iweghachite foto Ime Anwansi Ọgba Ọkụ Anya maka Sony Vegas TS Magic Player maka Opera: ndọtị dị mfe maka iyi egwu na ntanetị
Magic WiFi bụ ngwa dị mfe maka ịhazi netwọk ikuku na-adabere na kọmpụta na kọmpụta nke ngwaọrụ ngwaọrụ nwere ike ijikọ.
Onye Mmepụta: RuanMei